Aleo mifanena amin'ny mpamosavy toa izay (fantaro ny tohiny)... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raha ny ohabolana malagasy mahazatra aloha dia milaza fa aleo mifanena amin'ny mpamosavy toa izay mifanena amin'ny mpandainga. Henjana izany fanoharana izany. Noheverin'ny fiarahamonina Malagasy fahiny fa ratsy ny mosavy. Raha vao nisy aretina na tranga hafahafa ratsy fiseho dia efa mihevitra sy milaza ny Gasy fa mosavy no fiavian'izany. Natahorana. Na teo aza izany fahatahorana izany dia naleon'ny Gasy nilaza mivantana fa aleony mifanena amin'izay rangory fototr'izany mosavy izany toa izay mifanena amin'ny mpandainga. Giravy anie izany raha tanterahina ara-bakiteny e! Jereo ange:
Filoha hitoka-monina. Raha tanterahina io ohabolana io dia efa ela no tsy nisy nitsena intsony ny filoham-pirenena raha tonga nitsidika tanana iray. Moa tsy io filoham-pirenena io no niteny fa telo volana dia ho foana ny delesitazy ? Izao efa ho tapitra ny roa taona na 24 volana nitondrany na 3 volana impito niverina kanefa mbola injao fa tapatapaka ihany ny jiro. Efa midradradradra ny minisitra misahana ny angovo fa kely sisa e... Soa fa tsy mampihatra ara-bakiteny ilay ohabolana ny Malagasy ankehitriny fa raha tsy izany... Dia efa olon'irery teo ianao ry Filoham-pirenena.
Depiote mandainga. Raha tanterahina io ohabolana teo io dia tsy nisy nanatrika intsony ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana niantsoana ireo depiote teny Tsimbazaza androany talata tolak'andro. Feno mpandainga anie ny trano tao e. Mpandainga ny andaniny milaza fa manana maro an'isa izy ireo izay manohana ny memorandum (vakio hoe : memorandaoma), mandainga koa anefa ny ankilany milaza fa manana ny maro an'isa izy ireo eo anivon'ny Antenimieram-pirenena.
Zorinalisita mpandainga. Raha tanterahina io ohabolana io dia efa ela no tsy nisy niantso mpanao gazety hanatrika conf presse izany intsony indrindra taorian'ny famoahana vaovao diso be (lainga...) toa ireny filazana fa nisy vehivavy malagasy maty nampijaliana tany Koweït tany. Io no ohatra raisina fa raha ny vaovao diso tao ho ao izay no tanisaina dia maromaro ihany ka sao ny tena no voadaroka fa mba mifanerasera amin'ireo mpampita vaovao ireo ihany indraindray ary tena mbola mila azy ireo... Fa anjaran'ny tsirairay no mamakafaka, mijery, mandalina, mandinika mandany andro mihitsy vao mandray vaovao ho vaovao marina fa misy tokoa mantsy lasa mpampita hevitr'olona fotsiny sisa. Saingy, tsorina fa ny herim-batana anie tsy maharaka hanamarina izay voaray e ary ny fotoana koa tsy ampy. Fa moa tsy anjara asan'ny mpanao gazety ve ny manamarina ny zavatra ampitainy amin'ny mpanara-baovao ? Sa rehefa mahita olona manome henan'alika ireo mpanao gazety dia afaka mitabataba fa rehefa izy ireo manome zavatra tsy fihinana dia mafilotra ? (Zorinilaisita no mahazatra ny sofinanoho ny mpanao gazety…)
Marasily. Aleo mifanena amin'ny dahalo toa izay mifanena amin'ny mpitandro ny filaminana... Ny dahalo mba milaza ny marina fa hidaroka anao izy ireo. Ireto mpitandro filaminana noheverina fa hiaro anao indray no midaroka ary avy eo dia ambarany fa niaro tena izy ireo. Moa tsy izany na mitovy amin'izany no nambarany raha nanazava ny zava-nisy nitranga teny Ankatso izy ireo ? Teny Ankatso raha nidaroka an'i Jean-Pierre ilay mpianatra nitarika fitokonan'ny mpianatra io. Fa maro ireo tranga tao anatin'ny andro faramparany teo nahitana fa mandainga ireo mpitandro ny filaminana.
Fa aleo hajanona eto aloha ny fitanisana ireo sokajina mpandainga hita eo anivon'ny fiarahamonina fa sao dia zary hitoka-monina eto ny tena fa toa mahita mpandainga etsy sy eroa.
Fa moa ve mitovy ny mosavy sy ny sikidy ? Ny sikidy sy ny fanandroana ? Tsara aroso amin’ny tafa sy dinik’i Lakroa angamba izany resaka izany…